AKHRISO:- Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday ciidamada Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday ciidamada Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose
AKHRISO:- Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday ciidamada Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose
Hiiraan Xog, Sep 30, 2017:- Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah Siyaasi rug cadaa ah isla markaasna kamid ahaa musharixiintii isku soo taagay xilka madaxweynimo ee Soomaaliyaa ayaa ka hadlay xaaladda dowladda Soomaaliya iyo siyaasada ay hadda ku dhaqmeyso, Xasuuqii ciidamada dowladda loogu geystay Bariire iyo wayaabo badan.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay inay dowladda ku mashquushay kicinta xasarad siyaasadeed sidii ay uga shaqeyn laheyd inay wax kasta ku dhameyso Xasilooni siyaasadeed.
Wuxuu sheegay inay ku mashquulsaneyd markii Ciidamada dowladda la leenayey kicinta wuxuu ugu yeeray xasarad siyaasaded, wuxuuna sii raaciyey inay waligeed ku mashquulsanaan doonto.
Wuxuu sheegay in 27 sano la waayey koox sideed rabto dalka ka yeelato isla markaasna qaadato go’aano ku dhisan qaabka ay rabto.
haddaba halkaan hoose ka akhriso qoraalka uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur soo dhigay bartiisa Facebook:
Ilaa iyo hada dawlada kama muuqato falcelis la eg xajmiga khaaaaraha dagaal kii ay Alshabaab ku qaadeen Bariire. In ka badan 40 Askari ayaa dhintay, qaarkoodna la la’yahay, 15 Baabuur ayaa la gubay, qaarna la qabsaday. Sida muuqata dawlada waxaa mashquuliyey siyaasad, wayna mashquulin doontaa.
Waxaan in badan ku celcelinay, inkastoo ay dad badan dhibsadeen. Mar hadii aysan siyaasadu xasilnayn in aan waxa kale xoog loo heli doonin. Waa in xoogga la isugu geeyo sidii xasilooni siyaasadeed loo heli lahaa, xasarada iyo xiiso kicinta laga waantoobaa. Ku dhowaad 27 sano koox kaligeed masiirka dalka jaan goysa oo sidii ay la tahay u dhigta waa la heli waayey. Waayahaas waa in ka dhaxalnaa in ay lagama maarmaan tahay, talo loo dhan yahay oo cidna laga tegin, lagana tashan. Hadii Soomaaliga sokeeyaha la xaqiro, xasdo, xalna lala gaari waayo, ma hurayso Ajnabi isku soo xoojin, tanaasulkii la iska diidayna, isagoo qaali ah la bixiyo. Sida wararku sheegayanaa saan saan teedii way muuqataa ee intii aan meel dheer laga doonin, halaga gaaro oo go’aan geesinimo leh hala qaato. Garawshiyaha khaladka waxaa ka haboon in aad ku adkaysato.